မိုင်းယာဒဏ္ဍာရီ - ဝီကီပီးဒီးယား
မိုင်းယာဒဏ္ဍာရီ (အင်္ဂလိပ်: Maya mythology) သည် မီဆိုအမေရိက (သို့) အလယ်ပိုင်းအမေရိက ဒဏ္ဍာရီ၏ အပိုင်းဖြစ်ကာ မိုင်းယာလူမျိုးများ၏ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များပါဝင်၏။ ထိုပုံပြင်များ၌ သဘာဝတရား၏ အားများကို လူပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ခိုင်းနှိုင်းတင်စားထားသော နတ်ဘုရားများပါဝင်၍ ထိုနတ်ဘုရားများနှင့် သူရဲကောင်းများကြား အချင်းချင်းတုံပြန် ဆောင်ရွက်မှုများသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍအနေဖြင့်ပါဝင်သည်။ ဟစ်(စ်)ပဲန်နစ်ခေတ် မတိုင်မီ (အနောက်ကမ္ဘာခြမ်းအား စပိန်တို့မကျူးကျော်ခင်ခေတ်) က ဒဏ္ဍာရီများကို အနုပညာလက်ရာပစ္စည်းများတွင်ပါရှိသော ရုပ်ပုံ၊ သင်္ကေတများမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ထုတ်ဖော်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ မိုင်းယာတို့၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော တိရစ္ဆာန်ပုံပြင်၊ ရိုးရာပုံပြင်နှင့် များစွာသော စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များကို ဤ၌ ဒဏ္ဍာရီအဖြစ် စဉ်းစားမှုမရှိချေ။
၂ ကိုလိုနီခေတ်အစောပိုင်းနှင့် မကြာသေးမီက အရေးကြီးသော ဇာတ်လမ်းပုံပြင်အကြောင်းအရာများ
၂.၁ စကြာဝဠာ သဘောတရား
၂.၂ လူသားများအား ဖန်တီးခြင်း
၂.၃ သူရဲကောင်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ: ကမ္ဘာမြေကို စီစဉ်ခြင်း
၂.၄ ကမ္ဘာမြေနှင့် လက်ထပ်ခြင်း
၂.၅ နေနှင့် လတို့၏ ဇာစ်မြစ်
သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ရေးသားထားသော မိုင်းယာဒဏ္ဍာရီသည် (၁၆)ရာစုမှ စတင်၍ ဂွာတာမားလာ ကုန်ပြင်မြင့်များ (ဂွာတီမာလာ)မှ သမိုင်းကြောင်းရင်းမြစ်စာပေများတွင် တွေ့နိုင်သည်။ ဤမှတ်တမ်းမှတ်ရာများတွင် အရေးပါဆုံးမှာ ပိုပိုဗူး (Popol Vuh) စာသားများဖြစ်၍ ထိုအထဲတွင် ကီးချေး[မှတ်စု ၁] လူမျိုးတို့၏ ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ ပုံပြင်များ၊ သူရဲကောင်း အမွှာညီအကို ဟူးနာပူး (Hunahpu) နှင့် ရှဘလန်ကေး (Xbalanque) [မှတ်စု ၂] တို့၏ စွန့်စားခန်း ဇာတ်လမ်းအချို့ပါဝင်သည်။
ယူကာတန်သည် (Yucatán) နောက်ထပ်အရေးကြီးသော ဒေသဖြစ်၍ ချီလန် ဘာလမ်၏ ယူးကာတက်ဘာသာစကား(Yucatec) ဖြင့် စာအုပ်များတွင် အလွန်တရာရှေးကျသော ဒဏ္ဍာရီလာစာပိုဒ်များ ပါရှိကာ ဒဏ္ဍာရီအပိုင်းအစများကို အစောပိုင်း စပိန်ကိုလိုနီတို့၏ စဉ်ဆက်ပြမှတ်တမ်းများ၊ အစီရင်ခံစာများ၊ အစောပိုင်း သာသနာပြုများ ပြုစုခဲ့သော အဘိဓာန်များ စသည်တို့၌ ပြန့်ကျဲလျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုအထဲ၌ အဓိကအကျဆုံးမှာ ဒီယေးဂို ဒီ လန်းဒါး၏ "ရီလသီယွန် ဒီ လ(စ်) ကိုးရှပ်စ် ဒီ ယူကာတန်" (Relación de las cosas de Yucatán) စာအုပ်ဖြစ်သည်။
၁၉-၂၀ရာစုများတွင် မနုဿဗေဒပညာရှင်များနှင့် ဒေသတွင်း ရိုးရာစဉ်ဆက်ပုံပြင်လေ့လာသူများက မြောက်များစွာသော ပုံပြင်များကို အများအားဖြင့် စပိန် (သို့) အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် ရေးမှတ်ခဲ့ကြ၍ ရှားရှားပါးပါး မိုင်းယာဘာသာစကားနှင့် အတူယှဉ်တွဲတွေ့ရသည့် စာများဖြစ်သည်။ မိုင်းယာပုံပြင်အများစုသည် သမိုင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခု၏ အကျိုးဆက်ရလဒ်များဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါသမိုင်းဖြစ်စဉ်ဆိုရာ၌ စပိန်တို့၏ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်ရိုးရာဓလေ့များသည် မူရင်းရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများနှင့် အပြန်အလှန် အကျိုးပြု ဆက်စပ်လျက် ရှိသည်။ သို့သော် ထိုမူရင်းဇာတ်လမ်းပုံပြင်အချို့သည် သက်တမ်းအားဖြင့် စပိန်(တို့ကျူးကျော်သော)ခေတ်ကာလမတိုင်မီမှ ဖြစ်ကြသည်။ အရေးကြီးသော ဒဏ္ဍာရီများကို ခိုးလ် (Ch'ol) လူမျိုးများ၊ ကွက်ချီ (သို့) ကက်ချီလူမျိုးများ (Kekchi)၊ လန်ကာဒန်လူမျိုးများ (Lacandon)၊ တစို့တ်စစ်လ်[မှတ်စု ၃] (သို့) စို့တ်စစ်လ် လူမျိုးများ (Tzotzil)၊ တစူးတာဟီးလ်လူမျိုးများ (Tzutujil)[မှတ်စု ၄] နှင့် ယူးကာတက်နွယ် မိုင်းယာများ အတွက် နားလည်ရလွယ်ကူသော အကြောင်းအရာတစ်ချို့ကိုသာလျှင် ဖော်ပြရန် ရေးသားထုတ်ဝေပြီးဖြစ်သည်။ နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုအစပိုင်း၌ ရိုးရာဇာတ်လမ်းပုံပြင်များအား နှုတ်မှုရေးရာလက်ဆင့်ကမ်းခြင်း တစ်ခန်းရပ်ခဲ့လေသည်။
ကိုလိုနီခေတ်အစောပိုင်းနှင့် မကြာသေးမီက အရေးကြီးသော ဇာတ်လမ်းပုံပြင်အကြောင်းအရာများ[ပြင်ဆင်ရန်]
မိုင်းယာတို့၏ ဇာတ်လမ်းများတွင် သဘာဝ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်များ၏ ဇာစ်မြစ်ကို စနစ်တကျ တင်ပြထားရာ ပုံမှန်အားဖြင့် လူသားများနှင့် ၎င်းတို့ပတ်ဝန်ကျင်ကြား ဓလေ့ထုံးစံသဘော ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုများကို ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်သတ်မှတ်၍ တင်ပြထားလေသည်။ နည်းလမ်းတစ်သွယ်ဖြင့် အောက်ပါအရာများအကြောင်း ရှင်းလင်းချက်များကို တွေ့ရှိနိုင်သည် : ကောင်းကင်မှ အရာဝတ္ထုများ (နေ၊ လ၊ ဂြိုဟ် စသဖြင့်)၊ တောတောင်ရေမြေ၊ မိုး၊ မိုးကြိုး၊ တိမ်တိုက်...၊ အရိုင်း အယဉ် တိရစ္ဆာန်များ၊ ပြောင်းဖူး၌ရှိသော အရောင်အသွေး၊ ရောဂါဘယနှင့် ပရဆေးပင်များ၊ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ကိရိယာများ၊ ရေငွေ့ဖြင့် ရေချိုးခြင်း... စသဖြင့် ရှင်းလင်းချက်များရှိသည်။
ပိုပိုဗူး စာသားများက လောကဖန်တီးရှင် နတ်ဘုရားအုပ်စု တစ်စုသည် ကမ္ဘာမြေကို ဖန်တီးပုံနှင့် နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြထားသည်။ ချူးမေယဲဒေသမှ ချီလမ် ဘာလမ်၏ စာအုပ်က မိုးကောင်းကင်ပြိုလဲမှုနှင့် ရေလွှမ်းမိုးမှုကြီးအကြောင်း၊ ထို့နောက် ကမ္ဘာမြေပေါ်ရဇိ မိကျောင်းကြီးအား သုတ်သင်ခြင်း၊ ကောင်းကင်ကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်း တည့်မတ်ခြင်း၊ ကမ္ဘာ့သစ်ပင်ကြီးငါးပင် ကိုစိုက်ပျိုးကြီးထွား ထောင်မတ်ခြင်းတို့အကြောင်း ဆက်စပ်ဖော်ပြထားသည်။ လန်ကာဒန်လူမျိုးတို့သည် မြေအောက်ကမ္ဘာဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များကိုလည်း သိရှိခဲ့ကြ၏။
ပိုပိုဗူးက ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှုလေးခုနှင့်ပတ်သက်က အစီအစဉ်တစ်ခုကို ဖော်ပြထားရာ ပထမအနေဖြင့် တိရစ္ဆာန်များ၊ ဒုတိယ စွတ်စိုသော ရွှံ့စေး၊ ထို့နောက် သစ်တော၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ပြောင်းမှုန့်ညက်နှင့် ရေဖြင့်နယ်ထားသောအရာမှ ပထမဆုံးလူသားဘိုးဘေးများကို ဖန်တီးခြင်း တို့ပါဝင်သည်။ ဤဖန်တီးခြင်း၌ လန်ကာဒန်လူမျိုးများက အဓိကဆက်စပ်မျိုးနွယ်အုပ်စုကြီးများ၊ ၎င်းတို့အမြတ်တနိုးထားသော တိရစ္ဆာန်များကို ဖန်တီးခြင်းအကြောင်းအရာများ ဖြည့်စွက်ကြသည်။ လာ့စ် ကားစ(စ်)(Las Casas) က ၎င်း၏စာအုပ် Apologética Historia Sumaria ၌ ထိန်းသိမ်းထားသော ဗီရာပတ်ဇ်(Verapaz) ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုက လူသားများအားဖန်တီးခြင်းကို (လက်မှု)ကျွမ်းကျင်သော နတ်ဘုရားများဟူ၍ သတ်မှတ်ကာ ထိုနတ်ဘုရားများသည် ပိုပိုဗူး၌ပါရှိသော မျောက်ညီအကိုများနှင့် ဆင်တူသည်။ လူသားများအားဖန်တီးခြင်းအကြောင်းအရာကို လျှပ်စီးနတ်ဘုရားများက ပြောင်းတောင်တန်း (သို့) ခွန်အားဖြည့်တောင်တန်း ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ မီဆိုအမေရိက (သို့) အလယ်ပိုင်းအမေရိက ဇာတ်ဘမ်းပုံပြင်ဖြင့် အဆုံးသတ်ထားသည်။
သူရဲကောင်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ: ကမ္ဘာမြေကို စီစဉ်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ပိုပိုဗူး၌ပါဝင်သော လူသိအများဆုံး သူရဲကောင်း ဒဏ္ဍာရီမှာ မိစ္ဆာငှက်ဆိုးကြီးနှင့် 'ရောဂါ၊ သေခြင်းတရား နတ်များ ကို ခြေမှုန်းတိုက်ခိုက်သည့် သူရဲကောင်း အမွှာညီအကို ဟူးနာပူး နှင့် ရှဘလန်ကေးတို့အကြောင်းဖြစ်သည်။ အပြိုင်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သော ပြောင်းခင်းသူရဲကောင်း (နတ်)တစ်ဦးသည် မိုးကြိုး၊ လျှပ်စီး နတ်များကို ခြေမှုန်းအနိုင်ယူကာ ၎င်းတို့နှင့် မိတ်ဆွေဖွဲ့သည့်အကြောင်းအရာမှာလည်း အတော်လေးအရေးပါသည်။ လက်ရှိ ဤဇာတ်လမ်းပုံပြင်များ ပျံ့နှံ့မှုသည် ပင်လယ်ကွေ့ ကမ်းရိုးတန်းဒေသ၌သာ ဖြစ်သော်လည်း အမျိုးမျိုးသော အချက်အလက်များက ဤဒဏ္ဍာရီသည် တစ်ချိန်က မိုင်းယာတို့၏ ပါးစပ်ပြောရိုးရာပုံပြင်များ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟု ညွှန်းဆိုကြသည်။ ဂျဲဂယူဝါကျားသစ်များ (jaguar) ကို သူရဲကောင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးလျော့ချခြင်းနှင့် ထိုကျားသစ်စွမ်းအား အရည်အချင်းရယူခြင်း အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သော အရေးကြီးသည့် ဒဏ္ဍာရီလာ အပိုင်းအစများကို တစို့တ်စစ်လ်လူမျိုးများ နှင့် ချိုမိုင်းယာလူမျိုးများ က ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြလေသည်။
ဤဒဏ္ဍာရီလာအမျိုးအစားသည် လူသားများနှင့် အမဲပစ်ခံ တိရစ္ဆာန်များ၊ ကောက်ပဲသီးနှံများကြား ဆက်နွယ်မှုကို ဖော်ပြဖွင့်ဆိုသည်။ ကက်ချီရိုးရာပုံပြင်တွင် ရှေးဦးသူရဲကောင်းဖြစ်သော ရှဘလန်ကေးသည် ကမ္ဘာမြေနတ်ဘုရားတစ်ပါး၏ သမီးတော်ကို ပိုးပန်းရန် ဝတ်ရည်စုပ်ငှက်အသွသ်ပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုစဉ် မိန်းကလေးမှာ ယက်ကန်းခတ်နေ၏။ သူရဲကောင်း၏ ထိုဇနီးသည်ကို ဘဲငန်းငှက်အသွင်၊ ပျား၊ မြွေ၊ အင်းဆက် (သို့) ပြောင်း(ဖူး) အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ သူရဲကောင်းဖြစ်သူက အသာစီးရလျှင် နေမင်းဖြစ်သွား၍ ၎င်း၏ဇနီးသည်သည် လဖြစ်သွားသည်။ စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာချဲ့ကားထားသော တစို့တ်စစ်လ်မူ၌ အမျိုးသားတစ်ဦးကို ယခင်ဇနီးသည်နှင့် ကွာရှင်းပြတ်စဲစေရန် မိုးနတ်ဘုရား၏ သမီးတော်တစ်ပါးဆုချသည်ဟု ဆိုသည်။
နေနှင့် လတို့၏ ဇာစ်မြစ်[ပြင်ဆင်ရန်]
နေနှင့်လတို့သည် ကမ္ဘာမြေနှင့် လက်ထပ်အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၏ အကျိုးဆက်ရလဒ်ကား အမြဲတစေမဟုတ်ချေ။ မက္ကဆီကိုတောင်ပိုင်းပြည်နယ် ချစ်ယားပါ့စ် နှင့် အနောက်ဘက် ဂွာတာမားလာ(ဂွာတီမာလာ) ကုန်းပြင်မြင့်တို့မှ ညီငယ်လေးနှင့် မနာလိုတတ်သော အကိုကြီးများ (Younger Brother and his jealous Elder Brethren) ဇာတ်လမ်းပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရှိသည်။ အသယ်ဆုံးညီငယ်မှာနေမင်းဖြစ်သွား၍ မိခင်သည် လဖြစ်သွားသည်။ အကိုကြီးများမှာ တောဝက်နှင့် အခြားတောနေ တိရစ္ဆာန်များအဖြစ် အသွင်ပြောင်းကြသည်။ ပိုဗူးအမွှာဒဏ္ဍာရီပါ အကိုကြီးများသည် မျောက်အသွင်ဖြစ်သွား၍ ညီငယ်များမှာ နေနှင့်လဖြစ်သွားကြသည်။ မိုင်းယာဒေသ၏ အနောက်ဘက်တွင် ထိုနေနှင့်လဖြစ်သွားသော ညီအကိုများအကြောင်းသည် များစွာသောပုံပြင်များ၏ အဓိကအကောင်းအရာပိုင်းဖြစ်သည်။
↑ ဂွာတာမာလာဘက်မှ မိုင်းယာနွယ်ဝင် ကီးချေးလူမျိုးများ၏ မာယာဘာသာစကား
↑ (နီးစပ်သည့်)အသံထွက်ကို The Hero Twins: Against the Lords of Death [A Mayan Myth]) စာအုပ်မှ ယူသည်။
↑ ရှေ့စကားလုံးနှစ်လုံး 'တစို့' ကို cats အသံမှ နောက်ဆုံးအသံ 'တစ' ကဲ့သို့ ခပ်မြန်မြန်ထွက်၍ တသံဖြင့် ပိတ်ရန်
↑ ရှေ့စကားလုံးနှစ်လုံး 'တစူး' ကို cats အသံမှ နောက်ဆုံးအသံ 'တစ' ကဲ့သို့ ခပ်မြန်မြန်ထွက်ရန်
↑ (The Hero Twins: Against the Lords of Death [A Mayan Myth)မှတ်စုကိုးကား (၂)]
↑ Hopkins and Josserand 2016
↑ Danien 2005
↑ Bruce1974; Boremanse 1986, 2006
↑ Gossen 1974; Laughlin 1977
↑ Sexton 1992
↑ Burns 1983
↑ Roys 1967: 98-107; Taube 1993: 69-74; Knowlton 2010: 53-85
↑ Foster 1945: 191-196; cf. Nicholson 1967: 61-64
↑ Chinchilla Mazariegos 2017
↑ Morales Bermúdez 1999: 61-62
↑ Braakhuis 2010; Danien 2004: 37-44; Thompson 1970: 363-366;
↑ Chinchilla Mazariegos 2017: 164-168
Thompson, J. Eric S. (1970)။ Maya History and Religion။ Civilization of the American Indian Series, No. 99။ Norman: University of Oklahoma Press။ ISBN 0-8061-0884-3။ OCLC 177832။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မိုင်းယာဒဏ္ဍာရီ&oldid=705172" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။